China Magnetic powder brake Manufacture and Factory | I-Kangpa
1. Uhla olubanzi lokulawula lungenziwa kalula.
2. Ingafinyelela ukusebenza okuqhubekayo kokuhambisa.
3. I-torque esitebeleni ingatholakala.
4. Awukho umsindo we-tweet. Isimo se-stick-slip sendawo yesenzo sizokwenzeka ngendlela yokushayisana, kepha ngeke kwenzeke lapha, futhi ngeke kube khona umsindo wokuxhuma, ngakho-ke ukusebenza kuthule impela.
5. Amandla okushisa makhulu. Ngenxa yokusetshenziswa kwempuphu kazibuthe enokumelana okuhle kakhulu kokushisa kanye nendlela ekahle yokupholisa, ingasetshenziswa ngokuthula kwengqondo noma ekusebenzeni okushelelayo okuqhubekayo.
6. Isimo esisheshayo sokuqhubeka nokushayela singatholakala. Njengoba i-coefficient of static friction icishe ifane ne-coefficient of friction enamandla, ngeke kube khona ukudlidlizela lapho kuxhunywe ngokuphelele, futhi ukusheshisa nokunciphisa kungalungiswa ngokuya ngomthwalo.
1. Ukulawulwa kwe-torque ephezulu kakhulu Ibanga lokulawula i-torque libanzi kakhulu, futhi ukunemba kokulawula kuphezulu. I-torque yokudlulisa ne-current ethokozisayo isesilinganisweni esifanele, esingaqonda ukulawula okuphezulu.
2.Ukuqina okuphezulu nempilo ende, kusetshenziswa i-super alloy powder enamandla ngokumelana nokushisa okukhulu, ukugqoka ukumelana, ukumelana ne-oxidation kanye nokumelana nokugqwala, nempilo ende.
3. Ukuzinza okuhle kakhulu kwezimpawu ze-torque ezingaguquguquki Impuphu kazibuthe inezici ezinhle zikazibuthe, namandla okubopha phakathi kwezinhlayiya azinzile, futhi i-torque eslayishayo izinze kakhulu. Ayinabo ubudlelwano nenani elihlobene nezinguquko futhi ingagcina i-torque engapheli isikhathi eside.
4. Umsebenzi oqhubekayo wokuslayida usebenzisa isakhiwo sokupholisa esinomphumela omuhle kakhulu wokushabalalisa ukushisa kanye nokuguquguquka okufanayo kokushisa, okuhambisana nokumelana nokushisa okuphezulu kwe-powder kazibuthe, okuvumela ukuxhumana okukhulu namandla okubhraka namandla okuhambisa ngamandla, futhi kungashelela ngokushelela ngaphandle kokubanga ukudlidliza.
5. Ukuxhumeka kubushelelezi, umthelela mncane kakhulu uma kungekho mthelela, futhi ungaqala futhi ume kahle ngaphandle komthelela. Ngaphezu kwalokho, i-torque yokumelana incane ngokwedlulele futhi ngeke ibangele ukukhiqizwa kokushisa okungenamsebenzi.
6. Ilungele ukusebenza ngemvamisa ephezulu ngokuphendula ngokushesha kanye nesakhiwo esikhethekile sokushabalalisa ukushisa, efanelekile ukusebenza kwemvamisa ephezulu.
7. I-lightweight, free-free, life-long, compact and lightweight, use high-temperature coils resistant and special grease bearings, futhi usebenzise izindlela ezikhethekile zokwelapha ezingagqokile ezingalweni ezijwayele ukugqoka ukwelula impilo yenkonzo.
Ngenxa yezici ezingenhla zamabhuleki empuphu kazibuthe, ibisetshenziswa kabanzi ekwenzeni iphepha, ukuphrinta, oplastikhi, iraba, izindwangu, ukuphrinta nokudaya, ucingo nekhebula, insimbi, nezinye izimboni ezisebenza ngokugudluza zokulawula ukungezwani. Ngaphezu kwalokho, i-magnetic powder clutch nayo ingasetshenziselwa ukuqala kwe-buffer, ukuvikela ngokweqile, ukulawulwa kwejubane, njll. Ama-brake we-Magnetic powder nawo asetshenziselwa ukulayishwa kwe-dynamometer kanye nokubhaka imishini yokudlulisa.
Langaphambilini I-PUR eshisayo encibilikisa umshini wokunamathisela i-TH-101C
Olandelayo: I-PUR incibilika umshini wokunamathisela oshisayo we-PUR-101B
Powder bamba Brake
Umshini Wokunamathisela we-Pur Hot Melt Glue Nonwoven, Umshini Wokushisa we-Pur Hot Melt Adhesive Laminating, Umshini Oshisayo Wokunamathisela Okushisayo Wengubo Yengubo, Umshini Wokunamathisela Okushisayo Wokuncibilika Okushisayo NgeSitifiketi seCe, I-Hot Melt Glue Isicelo, Okuzenzakalelayo Hot Melt Glue wokulaminetha Machine,